मलेसिया र यूएईमा दुःख मात्रै पाइयो, स्वदेशकै कामले खुशी मिल्यो | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
मलेसिया र यूएईमा दुःख मात्रै पाइयो, स्वदेशकै कामले खुशी मिल्यो
माघ १०, २०७५ बिहिबार १६:३३:३२ | उज्यालो सहकर्मी
बिमल घिमिरे, सूर्योदय नगरपालिका – ८ इलाम ।
डेढ लाख रुपैयाँ खर्चेर आफ्नै गाउँठाउँमा केही गरेको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो होला । विदेश गएर त पैसा र समय मात्रै नाश भयो । सायद मलाई यस्तो सोच आजभन्दा पाँच वर्षअघि नै आएको भए विदेशको दुःख भोग्नै पर्दैन थियो होला ।
२०७० सालको कुरा हो, त्यतिबेला म १९ वर्षको भएको थिएँ । एसएलसी पास भएपछि कमाउन विदेश जाने सोच आयो । मलेसिया जाने भइयो । मलेसिया जान मैले एक लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझाएँ म्यानपावरलाई ।
काम होटलमा पर्‍यो । जाने बित्तिकै त सबै नेपालीको समस्या त्यही त हो भाषा नबुझिने, काम पनि नजानिने । किचेनमा सहयोगीको काम गरें । केही समयपछि कुक हुन पाइयो । एक त असुरक्षित ठाउँ, त्यसमाथि हामी सोझा नेपाली । सबैले हेप्ने ।
बिहानै उठ्यो । काममा गयो । अनि बेलुका आयो, सुत्यो । फेरि भोलिपल्ट बिहानै उठ्यो अनि काममा गयो । साह्रै दिक्क लान्ने रहेछ । आफ्नो घरपरिवार छाडेर टाढा हुनुपर्दा एक्लो महशुस हुन्थ्यो । गाउँघरमा मनाइने चाडबाडको साह्रै याद आउँथ्यो ।
जे भए पनि तीन वर्ष त बस्नै पर्‍यो । डेढ लाख रुपैयाँ त ऋण नै थियो । त्यसको ब्याज पनि । महिनाको ३० हजार रुपैयाँ त थियो तलब । त्यसबाट कति ऋण तिर्नु, कति आफूलाई राख्नु, कति परिवारका लागि खर्च गर्नु । पाँच लाख रुपैयाँ कमाएको थिएँ, तीन वर्षमा ।
करार अवधि सकिएपछि २०७३ सालमा घर फर्किएँ । घर फर्किएर के गर्ने भन्ने भयो । ६ महिना जति यसै बसें, अनि त्यसपछि यूएई गएँ । यूएई जानका लागि पनि एक लाख ३० हजार रुपैयाँ तिरेको थिएँ म्यानपावरलाई ।
यूएई जाँदा मलेसिया जाँदाको जस्तो अन्यौंल थिएन । किनभने कुककै काम हुन्छ भनेको थियो म्यानवारले । मलेसियामा तीन वर्ष त्यही काम गरेकाले काम गर्न सक्नेमा ढुक्क थिएँ ।
तर त्यहाँ पग्दा त काम अर्कै पर्‍यो । बगैँचामा सफा गर्न पर्ने । त्यहाँको गर्मीमा बाहिरको काम ! भनेको जस्तो काम र तलब नभएपछि म दुई महिनामै स्वदेश फर्किंएँ ।
यूएई जाँदा मलेसियामा कमाएर ल्याएको पैसा पनि सकियो । घरमा आम्दानीको बाटो नहुँदा राम्रोसँग पढ्न पाइएन । बरु कमाएर केही गर्नु भनेर भविष्य सोचेर नै गएको थिएँ । विदेश त्यस्तै भयो । लाखौं खर्चेर विदेश गएँ, तर केही भएन ।
घर आएर यसै बसिरहेको थिएँ । झापामा मःम बनाउने ठाउँमा काम मिल्यो । यहाँ म मःम डेलिभरी र मार्केटिङ पनि हेर्छु ।
यहाँ काम गर्दा धेरै फाइदा हुने रहेछ बल्ल पो बुझ्दै छु । बिमार हुँदा आराम पाइन्छ । न्यास्रो लाग्दा घर जान पाइन्छ । योभन्दा बढी मलाई त के चाहियो र !
मलेसियामा मरीमरी काम गर्दा ३० हजार रुपैयाँ कमाउँथें । तर यहाँ आरामले १२ हजार रुपैयाँ कमाउँछु । तर सबै कुरा हेर्ने हो भने यहीँको कमाइले नै जितेको छ ।
नजानेर विदेश पुगियो । कमाइभन्दा पनि दुःख बुझियो । अब यहीँ काम गर्दै पढ्ने योजना बनाएको छु । केही समय ढिलो भए पनि पढ्न छाड्दिन ।